July 2021 - Achawlaymyar
ဂ်ပန္ဖိုက္တာ ယူရွင္အိုကာမီ ဘက္ကစိန္ေခၚခ်င္းကိုျပန္လည္ တုံ႕ျပန္လိုက္တဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္
July 31, 2021 by Achawlaymyar
ဂ်ပန္ ဖိုက္တာ ယူရွင္ အိုကာမီ ဘက္ကစိန္ေခၚခ်င္းကိုျပန္လည္ တုံ႔ျပန္လိုက္တဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္း ပရိသတ္ႀကီးေရ ေအာင္လအန္ဆန္းက ဘရာဇီးႏိုင္ ငံသား လီအန္ဒ႐ိုအေတးစ္ ကို အႏိုင္ယူၿပီးခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္ ဖိုက္တာ ယူရွင္ အိုကာမီက ေအာင္လ ကိုစိန္ေခၚ လိုက္တာကို ပရိသတ္ႀကီး သိၿပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္ ။ ဂ်ပန္ ဖိုက္တာ ယူရွင္ အိုကာမီ စိန္ေခၚမႈကို ေအာင္လ ဘက္က လက္ခံ လိုက္တာကို ပရိသတ္ႀကီး အ တြက္ျပန္လည္မွ် ေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ ။ “ေအာင္လကို စိန္ေခၚလိုက္တဲ့ ဂ်ပန္ ဖိုက္တာ ယူရွင္ အိုကာမီ”ဂ်ပန္ ဖိုက္တာ ယူရွင္ အိုကာမီ က ေအာင္လအန္ဆန္း နဲ႔ ထိုးသတ္ဖို႔ေစာင့္ ေနတာျဖစ္ … Read more
(အသံတိတ် လူသတ်သမား) ကိုယ်တွေ့လေးမို့ပြောပြအုန်းမယ် အားကစားလုပ်တော့ ငှက်ပျော ဖီးကြမ်းစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဝယ်လာတယ် ဝယ်တဲ့နေ့ ဝင်းနေတော့ ၂လုံး စားတယ် နည်းနည်း ရင်ပူတာခံစားရတယ် ငှက်ပျောသီးကြောင့်လို့ ထင်မထားဘူး ည အိပ်ယာဝင် တစ်လုံးစားတော့ အတော် သိသာလာတယ် တစ်ညလုံး ရင်တွေပူ မနက်လည်း တစ်နေကုန် ရင်တွေပူ ပျို့အန် အတော်ခံစားရတယ် ဘာကြောင့်လည်း စဉ်စားရခက်ချိန် ငါးရောငိး ပြန်ရောက် ချိတ်ထားတဲ့ ငှက်ပျောဖီးကြည့်လိုက်တော့ အတော်လန့်သွားတယ် ပုံမှာ အတိုင်း အရည်တွေ ပျော်ကြ မဲကုန်ပြီး အတွင်းသားတွေက အရည်ပျော်ကုန်တယ် သဘာဝ ငှက်ပျောက ကြာလည်း အမှည့် လွန်တာကလွဲ၍ အရည်ပျော်မကျဘူးလေ ခြံထွက်မ ဟုတ်ရင် စားဖို့ အတော် ခက်သွားပြီ ဈေးကွက်တစ်ခု ရဖို့အတွက် လူတွေရဲ့ ဘဝ … Read more
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အလွမ်းတွေကို ဖွင့်ချပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုအမေ
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အလွမ်းတွေကို ဖွင့်ချပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုအမေ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီးမောင်နှံတော့ လက်ရှိမှာမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အရေးတွေကြောင့် ဖမ်းဝရံထုတ်ခံထားရပေမဲ့လည်း ဇွဲမလျှော့ဘဲ အမြဲတမ်းတက်ကြွစွာပါဝင်ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း ဝေဖန်ခံရမှုတွေတစ်ချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက်မဆုတ်ဘဲ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရှိနေပေးလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ရယူထားနိုင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုကပီပြင်လွန်းတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အကယ်ဒမီမင်းသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသုကဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ လက်ထက်ထိမ်းမြားထားပြီးတော့သာယာပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသုကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကနဲ့မတရားအမှုဖွင့်ခံရထားပြီးဘေးကင်းရာကိုတိမ်းရှောင်နေရပါ တယ်၊တိမ်းရှောင်နေစဉ်အတောအတွင်းမှာလဲလူမှူကွန်ယက်ကနေပြည်သူများအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်စာသားတွေကိုရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဘေးကင်းရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့်လည်း ပိုင်ဖြိုးသုတို့အနေနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့အမေဆုံးတော့လည်း လိုက်ပါပို့ဆောင်ခွင့်မရသလို အဖွားဖြစ်သူသေဆုံး တော့လည်း လိုက်ပါပို့ဆောင်ခွင့်မရနိုင်အောင် ပေးဆပ်ရမှုတွေ များနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာလည်း တိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကပိုင်ဖြိုးသုကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုအခုလိုပြောကြားလာပါတယ်၊လွမ်းလိုက်တာသမီးလေးရယ်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုတို့မိသားစုများသာမကခွဲခွာနေရတဲ့မိသားစုအားလုံးလဲပြန်လည်ဆုံးဆည်းနိုင်ပြီးတော့မတရားဖမ်းဆီထားတဲ့သူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပြီးအေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်၊ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် Weekly Myanmar ပရိသတ်ကြီးလည်း မိသားစုတွေ ပြန်ဆုံဆည်းနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်… Zawgyi မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အလြမ္းေတြကို ဖြင့္ခ်ျပလာတဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုအေမ ဒါ႐ိုက္တာဏႀကီးနဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံေတာ့ လက္ရွိမွာျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့အေရးေတြေၾကာင့္ ဖမ္းဝရံထုတ္ခံထားရေပမဲ့လည္း ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ အၿမဲတမ္းတက္ႂကြစြာပါဝင္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွာလည္း … Read more
မင်းမော်ကွန်းရေးသားလိုက်တဲ့ ဦးခိုင်တင်အတွက် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ နောက်ဆုံးနုတ်ဆက်စကား
July 31, 2021 July 31, 2021 by Achawlaymyar
မင်းမော်ကွန်းရေးသားလိုက်တဲ့ ဦးခိုင်တင်အတွက် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ နောက်ဆုံးနုတ်ဆက်စကား ပရိသတ်ကြီးရေ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်တိုင်အောင် ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်စွာနဲ့ သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင် ပန်ချီးဦးခိုင်တင်ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်.. မြန်မာဇာတ်လမ်းတိုင်းလိုလိုမှာ ပါဝင်တတ်သူ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာ နေရာတစ်နေရာကို ခိုင်မာအောင် ယူထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ . ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ်အခြေအနေကို တောင့်ခွံထားနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါ ဘူးနော်. နေ့ရက်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာ လိုအပ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေ မရရှိနိုင်တာကြောင့် အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေကြရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ဆုံးရှုံး၇တဲ့ ပြည်သူတွေထဲ မှာလည်း အနုပညာရှင်များကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်နေသလို သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များကိုလည်း ဆုံးရှုံးနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အနုပညာရှင်များဆိုရင် ကိုယ်တိုင်လည်း ရောဂါပိုးကြောင့် ခံစားနေရတာ ဖြစ်သလို တစ်ချို့လည်း ပြည်သူတွေကို အလှူူအတန်းတွေ ပြုလုပ်ပေးနေကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ … Read more
ေဖာက္ျပန္ျခင္းဆိုတာ ဗီဇနဲ႔ပဲ ဆိုင္တာပါ
ေဖာက္ျပန္ျခင္းဆိုတာ ဗီဇနဲ႔ပဲ ဆိုင္တာပါ ။ ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမ ဘယ္သူက ပိုၿပီး ေဖာက္ျပန္တတ္သလဲလို႔ မေတြးနဲ႔ … ေဖာက္ျပန္ျခင္းဆိုတာ ဖိုမ သဘာ၀နဲ႔ မဆိုင္ဘူး တကယ္ေ တာ့ ဗီဇနဲ႔ပဲ ဆိုင္တာပါ ။ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ဗီဇပါလာတဲ့သူက နီးတာေဝးတာေတြ မဆိုင္ပဲ ေဖာက္ျပန္ၿမဲ ေဖာက္ျပန္တတ္ပါတယ္ ။ ဒီတစ္ခါ ခြင့္လႊတ္ေပးလိုက္ရင္ေတာ့ ျပင္လာမွာပါဆိုၿပီး အမွားေတြကို အမွန္ျပင္ေစခ်င္ေနတာလား အဲ့ေလာက္မလြယ္တတ္ဘူးေနာ္ ။ တစ္ခါ ေဖာက္ျပန္ဖူးတဲ့သူက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေဖာက္ျပန္ေနဖို႔ ၀န္မေလးတတ္ၾကဘူးေလ ။ ကိုယ္ ခြင့္လႊတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္နာက်င္ဖို႔ … လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္သလိုပဲ ျဖစ္သြားတာပါ ။ ဘာလို႔ ေဖာက္ျပန္ရတာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြလဲ မေတြးနဲ႔ … … Read more
သားျဖစ္သူေရမြန္ဆံုးသြားတာကို ခုခ်ိန္ထိမယံုၾကည္ႏိုင္ေသးလို႕ ေန႕တိုင္းရင္ကြဲမတတ္ငိုေႂကြးေနတဲ့ ေရမြန္ရဲ႕မိခင္ (႐ုပ္သံ)
ပရိသတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာ္ ေရမြန္ကြယ္ လြန္သြားတာ တစ္လ ေက်ာ္သြားခဲ့ပါၿပီေနာ္။ တစ္လျပည့္သြားေပမယ့္ ေရမြန႔္ အေမနဲ႔ ညီမေလးကေတာ့ အခုထိ တမ္းတသတိရေနဆဲပါပဲေနာ္။ မိသားစု သုံးေယာက္တည္းရွိတဲ့ကမာၻေလးကို ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလိုက္မလဲေနာ္။ သားအတြက္ ရည္စူးၿပီး အလႉေတြ လုပ္ေပးေပမယ့္လည္း အခုထိ ေမ့မရေ သးဘဲ သတိရေနဆဲပါပဲေနာ္။ သားကိုလြမ္းတဲ့စိတ္နဲ႔ ေန႔စဥ္ ငိုေႂကြးေနတဲ့ အေမ့ကို ၾကည့္ၿပီး လျပည့္ကဗ်ာမွာ ႏွစ္သိမ့္ဖို႔ စကားလုံးေတာင္ ရွာမေတြ႕ခဲ့ပါဘူးေနာ္။ ဒီျမင္ကြင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သားတစ္ေယာက္ကို ဆုံးရႈံးလိုက္ရတဲ့ မိခင္ေနရာကေန ကိုယ္ ခ်င္းစာမိၾကမွာပါေနာ္ ပရိသတ္ေတြလည္း အန္တီခင္ျမတ္မြန္ကို အားေပးစကားေလးေတြ ေျပာေပးသြားၾကပါဦးေနာ္။ unicode ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ရေမွန်ကွယ် လွန်သွားတာ တစ်လ ကျော်သွားခဲ့ပါပြီနော်။ တစ်လပြည့်သွားပေမယ့် ရေမွန့် အမေနဲ့ … Read more
တရုတ်နိုင်ငံက ကြောက်စရာ ရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ထူးခြားလှတဲ့ ကောင်းကင်မှ ရေများစုပ်ယူနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင် တရုတ်နိူင်ငံ Guangzhou တွင်ရေလွမ်းမိုးမှု့ နှင့်အတူထူးခြားဖြစ်စဉ်အတိတ်နိမိတ် ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင်Guangzhou တွင် တစ်နာရီကျော်သာမိုးရွာခဲ့ပေမယ့် လမ်းအားလုး နီးပါးရေလွှမ်းမိုးခဲ့သည်……. မြေအောက်ဘူတာသည် ရေများဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီး (၆)ပေအထိ ရေတက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်……. မိုးမရွှာသွန်းမည် Guangzhou Nansha တံတား အနီး၌ ကောင်းကင်မှရေများစုတ်ယူနေသည့် ထူးခြားအ့ံဖွယ်ဗွီဒီယိုကိုလည်း ဒေသခံများက ရိုက်ကူးထားကြသည်……. Credit-𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 Zawgyi တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေၾကာက္စရာ ေရလႊမ္းမိုးမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ထူးျခားလွတဲ့ ေကာင္းကင္မွ ေရမ်ားစုပ္ယူေနတဲ့႐ုပ္သံဖိုင္ တ႐ုတ္ႏိူင္ငံ Guangzhou တြင္ေရလြမ္းမိုးမႈ႕ ႏွင့္အတူထူးျခားျဖစ္စဥ္အတိတ္နိမိတ္ ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္Guangzhou တြင္ တစ္နာရီေက်ာ္သာမိုး႐ြာခဲ့ေပမယ့္ လမ္းအားလုးံ နီးပါးေရလႊမ္းမိုးခဲ့သည္……. ေျမေအာက္ဘူတာသည္ ေရမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး (၆)ေပအထိ ေရတက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္……. မိုးမ႐ႊာသြန္းမည္ … Read more
အောင်လနိုင်ရင် ခိုင်းချင်တာခိုင်း ဆိုတဲ့ ကတိအတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဖူးပွင့်ခိုင် မနေ့ကပြောထားတဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ဝက်ကိုတော့ အခုဖြည့်စည်းပေးလိုက်ပါပြီနော် ဆန် / ကြက်ဥ / ငါးသေတ္တာ /တမျိုးစီကို 100ကျပ် ဖြစ်ကြိုက်တာယူနိင်ပါတယ် Mask တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးHandgel တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးကFree ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဖူးနဲ့အတူကုသိုလ်ယူနော် မူဆယ် ဆိုပြီး သူရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ ပုံလေးတွေတင်ပြီ သူမရဲံ ကတိတစ်ဝက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit အောင်လနိုင်ရင် ခိုင်းချင်တာခိုင်း ဆိုတဲ့ ကတိအတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဖူးပွင့်ခိုင် မနေ့ကပြောထားတဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ဝက်ကိုတော့ အခုဖြည့်စည်းပေးလိုက်ပါပြီနော် ဆန် / ကြက်ဥ / ငါးသေတ္တာ /တမျိုးစီကို 100ကျပ် ဖြစ်ကြိုက်တာယူနိင်ပါတယ် Mask တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးHandgel တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးကFree ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဖူးနဲ့အတူကုသိုလ်ယူနော် မူဆယ် ဆိုပြီး သူရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ … Read more
ဝမ္းသာစရာ မဂၤလာသတင္းတစ္ခုလို႔ဆိုရပါမယ္… ခုဆိုရင္ ကိုဗစ္ကို အႏိုင္တိုက္ထုတ္လိုက္ႏိုင္တဲ့ ကမာၻ႔ ပထမဆုံးႏိုင္ငံတစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ကမာၻေပၚတြင္ ဘ႐ူးႏိုင္ငံဟာ ကိုဗစ္ကင္းစင္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေၾကာျငာႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ကမာၻေပၚတြင္ ကိုဗစ္လုံးဝမရွိတဲ့ႏိုင္ငံထဲတြင္ ဘ႐ူးႏိုင္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကိုဗစ္စျဖစ္ကတည္းက ေသဆုံးသူ ၂ဦးသာရွိခဲ့ပါတယ္။ ကိုဗစ္လူနာ ကူးစပ္သူ မရွိတာ ၃ လေက်ာ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္၊။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မူ စီမံခန္႔ခြဲမူေကာင္းမြန္မူေၾကာင့္လုံးဝကင္းစင္ႏိုင္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံလည္း ကပ္ေရာဂါေဘးမွ အျမန္ဆုံးေက်ာ္လႊာနိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။ Credit Unicode ဝမ်းသာစရာ မင်္ဂလာသတင်းတစ်ခုလို့ဆိုရပါမယ်… ခုဆိုရင် ကိုဗစ်ကို အနိုင်တိုက်ထုတ်လိုက်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘရူးနိုင်ငံဟာ ကိုဗစ်ကင်းစင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းကြောငြာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကိုဗစ်လုံးဝမရှိတဲ့နိုင်ငံထဲတွင် ဘရူးနိုင် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကိုဗစ်စဖြစ်ကတည်းက သေဆုံးသူ ၂ဦးသာရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်လူနာ ကူးစပ်သူ မရှိတာ … Read more